Olee otú Mepụta a Sports mata iMovie 11
Ọ bụ Baseball oge na United States. E nwere nnọọ ọtụtụ ndị bi na United States dị ka Baseball nke ukwuu. Ị ga-aga ịhụ baseball egwuregwu na-ewere ụfọdụ foto na vidiyo. Olee banyere-eme a nchekwa data nke baseball otu òtù na ike pụtara ìhè videos? I nwekwara ike ime ka ọ pụta ìhè videos maka ihe ọ bụla ndị ọzọ egwuregwu. Isiokwu a ga-agwa gị otú ike a egwuregwu isi iji iMovie.
Nzọụkwụ 1. Mepụta a òtù egwuregwu
Akpa, ị chọrọ iji wuo otu na ịgbakwunye ọkpụkpọ ọmụma. Ka ịmepụta a otu, ị nwere ike ịga Ohere Egwuregwu Team Editor-emeghe nchịkọta akụkọ, ebe ị pụrụ ịhụ a sample otu. Ike gị otu, pịa + bọtịnụ na nyegharịa ya na-amasị gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ pụta ìhè videos a dị iche iche egwuregwu, pịa Sport mmapụta menu ịhọrọ site na Baseball, basketball, Football, ịgba bọl, ma ọ bụ Volleyball.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na nri, e nwere logo ngosi. Ị nwere ike pịa + bọtịnụ na họrọ otu foto site na kọmputa gị dị ka otu logo na ịdọrọ ihe mmịfe ịgbanwe size nke logo-eme ka ha kasị mma kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 2. Add ọkpụkpọ ọmụma
Na Players ndepụta, ị nwere ike pịa + bọtịnụ tinye ọhụrụ ọkpụkpọ. Pịnye na aha na ozi ndị ọzọ banyere otu ọkpụkpọ. I nwekwara ike ịgbakwunye otu foto na nke ọkpụkpọ na ịdọrọ ihe mmịfe ịgbanwe foto size, nke bụ otu ihe na otu logo. Mgbe ị na-okokụre ejuputa na niile otu egwuregwu ọmụma, ị nwere ike pịa mere ịzọpụta.
Nzọụkwụ 3. Mepụta a oru ngo iji egwuregwu isiokwu
Na iMovie, ike a ọhụrụ oru ngo na họrọ Sports isiokwu.
Nzọụkwụ 4. tinye ma dezie gị egwuregwu isi utu aha
Pịa Aha Nchọgharị bọtịnụ na toolbar na-ele utu aha dị ka isiokwu. Iji tinye a aha, ịdọrọ ya jidesie a clip gị oru ngo. Ị nwere ike ịchọta a zuru ezu Nduzi na otú ịgbakwunye ndepụta okwu ka iMovie.
Mgbe ahụ ịhụchalụ ọrụ gị na nri ị na-elele window. Ọ bụrụ na ihe niile bụ OK, na-ebipụta ya na-eso ya na ndị ezinụlọ na ndị enyi.
> Resource> iMovie> Olee otú Mee a Sports mata iMovie